मंसिर १५, काठमाडौं । कात्तिक मसान्तसम्म नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुवै योजनाको एनएभी वृद्धि भएको छ । नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ र नबिल इक्विटी फण्डको एनएभी बढेको हो ।
नबिल इक्विटी फण्डको एनएभी असोज मसान्तसम्म रू. १० दशमलव ९४ रहेकोमा कात्तिक मसान्तमा वृद्धि भएर रू. ११ दशमलव ५६ पुगेको छ । त्यसैगरी, नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ को एनएभी असोज मसान्तमा रू. ११ दशमलव शून्य ५ रहेकोमा कात्तिक मसान्तमा रू. ११ दशमलव ५८ पुगेको हो ।
यी दुवै योजनाको एनएभी बढेसँगै नाफामा पनि वृद्धि भएको छ । नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ ले असोज मसान्तमा रू. ८ करोड ९८ लाख ९४ हजार नाफा कमाएकोमा कात्तिक मसान्तमा वृद्धि भएर रू. १४ करोड ९० लाख ४८ हजार पुगेको हो ।
त्यसैगरी, नबिल इक्विटी फण्डले कात्तिक मसान्तसम्म रू. १९ करोड १७ लाख १५ हजार नाफा कमाएको छ । यस योजनाले असोज मसान्तसम्म रू. ११ करोड ४६ लाख ४२ हजार नाफा कमाएको थियो ।
यस योजनाले कात्तिक मसान्तसम्म सूचीकत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेञ्चर तथा मुद्धति निक्षेपमा गरेको लगानीको लागत मूल्य रू. १ अर्ब १५ करोड २९ लाख ९४ हजार रहेकोमा यसको बजार मूल्य रू. १ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ३६ हजार पुगेको छ ।
त्यसैगरी नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ ले कात्तिक मसान्तसम्ममा सूचीकृत तथा सूचीकत नभएका शेयर डिबेञ्चर तथा मुद्धति निक्षेपमा गरेको लगानीको लागत मूल्य रू. ७६ करोड ९३ लाख ९३ हजार रहेकोमा यसको बजार मूल्य ९० करोड २७ लाख ४३ हजार पुगेको छ ।
सानिमा लार्ज क्याप फण्डको इकाईमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन [२०७७ माघ, १५]
दोस्रो घण्टामा २९.८२ अंकले बढ्यो बजार, प्रभु लाइफको शेयरमूल्य १० % ले वृद्धि (१ बजेको अपडेट)[२०७७ माघ, १५]
चालू आवको ६ महीनामा नेपाल एसबिआई बैंकको नाफा ५१ करोड ४८ लाखभन्दा बढी[२०७७ माघ, १५]
६ महीनामा एनसीसी बैंकको नाफा ६१ करोड ४० लाख[२०७७ माघ, १५]
खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेसँगै सिद्धार्थ बैंकको नाफा १० % घट्यो[२०७७ माघ, १५]
भारतीय मजदूर ल्याउन नसक्दा देशभरका ४० प्रतिशत इँटा उद्योग बन्द